I-Boerboel yaseNingizimu Afrika iyinja yomndeni enhle kakhulu, inothando nawo wonke amalungu omndeni, izingane ezinothando. Umgomo oyinhloko ukuvikela umnikazi nomndeni wakhe.
Kusukela kumlando wohlobo
INingizimu Afrika ibhekwa njengendawo yokuzalwa yale nja, naphezu kokuthi izimpande zalezinja zasendulo zivela e-Asia. E-Asiriya, lezi zilwane zasetshenziswa njengamasosha, zimboza imizimba yazo ngezikhali ezikhethekile. U-Alexander waseMakedon wabalethela eGibhithe waya eYurophu. Ngemva kwesikhashana, amakhowe avela kuma-Boerboels athathwa izinja zokuqapha nokuzingela. Kunombono wokuthi cishe zonke izinhlobo zezinja ezaziwayo zaseYurophu zivela kulezi zilwane ezimbili.
Sekuqaleni kwekhulu le-XVII, lolu hlobo lwabuyiselwa emuva kusukela ku-European breeds. Ngalesi sikhathi, yayisetshenziswa njengenja yepulazi. Ngenxa yokukhethwa kwemvelo, iBoerboel eqinile neqinile yase-Afrika ivele.
Eminyakeni engama-80 yekhulu leminyaka elidlule, umsebenzi waqala ngokubuyiselwa kwalesi sizwe eNingizimu Afrika.
Inja enkulu kakhulu ekhulayo ekhula kuze kube ngu-75 cm isisindo esinzima ngaphezu kuka 80 kg. Umzimba wakhe uvumelanisa futhi ulinganisela kahle, isidumbu sichazwe ngokucacile, isifuba sinamandla futhi sinamandla kakhulu.
I-Boerboel yase-Afrika inembuyiselo eguquguqukayo, umzimba owenziwe kancane, yakha isisindo esinamandla, izitho ezinamandla ezinamahloni. Ama-Boerboels aseNingizimu Afrika athuthela ngokuthula.
Inja ibhalwe ngokuphelele futhi inempilo enhle nokuphila isikhathi eside. Ngokunakekelwa kahle, uhlala iminyaka engu-15.
E-Boerboel yifushane futhi ibushelelezi. Umbala uvame ukhilimu, ukukhanya okwesibhakabhaka, obomvu obomvu, futhi kungenzeka ukuthi i-tiger futhi ibonakala. Emzimbeni ngokuvamile kuvame ukubona "imaski", izindlebe zimnyama.
Umlingisi we-Boerboel wase-Afrika
Izimpawu zobuntu kanye nohlamvu lweBoboboel yizici zofuzo, okwakusungulwe iminyaka embalwa, kusukela ekukhethweni kwemvelo kwakukhona abantu abaqine kakhulu abanamakhono athile engqondo nangokomzimba. Izimo zomsebenzi kanye nokuphila zazingekho emkhakheni wezinja eziyiziphukuphuku, ezizethemba ngokweqile noma ezingenangqondo.
I-Boerboel ye-Dog yaseAfrika ine-psyche ezinzile. Ngenxa yesisindo sayo esiphuthumayo nokukhula, kuyiselula futhi iyasebenza. Ngoba kudinga ukuzivocavoca umzimba nsuku zonke, isibonelo, ukugijima ku-5 km.
I-Boerboel yaseNingizimu Afrika - hhayi inja engenamakhono, enokulinganisela, enomlingiswa omuhle. Umngane othembekile futhi othembekile kuwo wonke amalungu omndeni, olungele ukugijima ukuvikela nganoma yisiphi isibili. Uyakujabulela ukudlala nezingane kakhulu, futhi uyabanakekela ngokucophelela.
Kusukela kumnikazi wakhe othandekayo i-African Boerboel, isithombe sakhe ongayibona esihlokweni sethu, silinde ukunakwa nokukhathazeka.
Le nja ayibonakaliswa ngokubi kakhulu nokuhlukunyezwa okungenabulungisa. Uqotho kwabanye.
I-Boerboel yase-Afrika efundiswa kahle ayibambi izingxabano nezinye izilwane ezifuywayo ezifuywayo. Abantu abangabazi bangabethembekile, kodwa qaphela.
I-Boerboel yaseNingizimu Afrika yisilwane esinezici ezikhanyayo. Uzimele kakhulu futhi uzimele. Abesilisa bathanda ukulawula, ngakho ukuziphatha kungadingeka ukuthi kulungiswe, uma imbongi ingakhuliswa kahle.
Lezi zinja ngokwemvelo zinikezwe inkumbulo enhle, zifunda ngokushesha kakhulu. Ekucabangeni kwamaqembu abacatshangelwayo futhi alulaza - awasetshenzisiwe ukwenza imiyalo nge-automatism engazi lutho.
Uma ubona ukuxoshwa okucacile lapho uqhuba imiyalo yi-Boerboel omdala, lokhu kusho ukuthi ukwethembeka kwakho kushukunyiswe kakhulu noma wenze amaphutha avelele ekukhuliseni. Ukulungisa ukuziphatha kwesilwane esikhulile, sincoma ukuthi uthintane ne-cynologist.
Uma ngesizathu esithile unquma ukwenza lo msebenzi ngokwakho, bese uqaphela kakhulu. Vimbela ukuphambuka okuncane ekusebenzeni kwethimba. Qhubeka, kodwa kungenjalo ungasebenzisi amandla omzimba. Uma kungenjalo, uzolahlekelwa ngokuphelele ukwethembeka kwakho, khona-ke kuyoba nzima kakhulu ukusungula ubuhlobo nesilwane.
I-African Boerboel, enezithombe ozibonayo kulesi sihloko, isilwane esisebenzayo esithinta kalula kunoma yisiphi isimo sezulu. Naphezu kokuthi lokhu kungokwemvelo, kungakwazi ukuvumelanisa nanoma yiziphi izimo.
E-Afrika, lezi zinja zihlala evulekile. Ezweni lakithi bavame ukugcinwa ezindlini zokuhlala emadolobheni. Izilwane zizizwa zikhulu futhi ezindlini zezwe. Bangaphila emoyeni omusha, kanye nasemakamelweni okugcoba. Kodwa kufanele abe nebala lokukhululeka. Inja ekhulelwe kanye ne-bitch nama-puppies bahlale behlala endaweni evikelekile.
Qaphela ukuthi ayikho into ebhalwe kuyo lapho isilwane silele khona. I-Litter akumele ibe nzima kakhulu.
Ukubeletha i-puppy kungadinga ukunciphisa ukuxhumana kwakhe nabantu abangabazi. Into ethi uBoboboel (ubufakazi bobanikazi bakho buqinisekisa lokhu) buyintandokazi kakhulu, ngakho-ke kungasheshe kusetshenziswe izivakashi, ezivame ukuza endlini. Uzobethemba, kanye nawo wonke amalungu omndeni.
I-Boerboel yase-Afrika, ngokungangabazeki, inikwe ukuhlakanipha okukhulu, kanye nenkumbulo enhle kakhulu. Ungakhohliswa uma kubonakala kuwe ukuthi inja iphendula kancane kancane imiyalo. Ukuphuza kungumphumela wokusebenza kwengqondo, ubuqili nokuhlakanipha. UBoboboel akalokothi enze ngokuzenzakalelayo, kodwa emva kokuhlolwa kwesimo.
Ukukhethwa kwemvelo kwenza i-Boerboel isilwane esinezakhi zofuzo. Abahlengikazi bezilwane baqaphele izinkinga ezimbili eziyisisekelo ezingahle ziphathelene nempilo yala madoda angamahle.
Owokuqala kubo uqobo kubo bonke izinja ezinkulu. Kuyinto efanekisela izifo ezihlangene (i-dysplasia).
Inkinga yesibili i-hyperplasia yangasese, lapho i-bitches ikhona khona. Lesi sifo siyisakhi zofuzo. Ifa. Izilwane ezinjalo zifakiwe ekuzaleni.
Kungakanani amantombazane kaBoerboel?
I-puppy yaseNingizimu Afrika i-Boerboel ingadla kusuka kuma-ruble angu-5000. Leli nani libuzwa abanikazi besilwane ngaphandle kwemibhalo. Intsha yabazali bezinkampani ibiza ama-ruble angu-50 000.
I-African Boerboel - ukubuyekezwa komnikazi
Abanikazi balezi zinja ezinhle bathi umlingani ongcono kakhulu akatholakali. Le nja iheha umlingiswa wayo omuhle kakhulu, isimo esijabulisayo, ukuxhumana nomuntu kanye nokukwazi ukuhambisana nazo zonke izakhamuzi zendlu. Ngaphezu kwalokho, iningi lalaba inja inothando kakhulu futhi izinikele kakhulu kumnikazi.
I-Epagnolo Breton: incazelo, uhlamvu, isithombe. Izinja zokuzingela
"Yiba okunempilo! Amavithamini Kwabesifazane A kuya Zn »: ukwakheka kanye izakhiwo
Canon MF4410: ikhambi ephelele inhlangano yabezindaba hhayi kuphela ihhovisi amancane noma ikhaya